ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးမှ အသံများ | ဒီရေ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး နဲ့ပတ်သက်လို့..ဦးရွှေမန်း ပြောကြားချက်အား ဦးဝင်းချိုမှ လမ်းညွန်ချက်တောင်းဆိုချက်
(၇၄) ဖွဲ့ စည်းပုံကို (၈၉)မှာ ပါတီစုံ စံနစ်ကျင့် သုံးရင် မကိုက်ညီ တဲ့ အတွက် ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ (၂၀၀၈)ကျမှ ဖွဲ့ စည်းပုံအသစ် အတည်ပြု ၊ပြဌာန်းတယ်။အသက်မ၀င်သေးဘူး။အဲဒီအချိန် အတောအတွင်းမှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ တယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုတာ“ ရန်သူ” နဲ့ကိုယ့် ဘက်သား နှစ်မျိုးဘဲရှိတာကိုး။အဲဒီအချိန်အတွင်းက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့် ကျင်ခဲ့ သူတွေ (ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဘဲဆန့် ကျင်သည်ဖြစ်စေ၊)ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ သူတွေကို ဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့အခုလက်ရှိအစိုးရ ကလျှောက်လှမ်းမယ် လို့ ကြေငြာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကို(သူတို့ လည်း)သွားချင်တဲ့ သူချင်းအတူတူမို့ ပါ။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆန့် ကျင်တာပါ။ တပ်မတော် ကိုဆန့် ကျင်တာ မဟုတ်သလို လက်ရှိအချိန် နိူင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက် ရမယ့် အချိန်မှာ သူတို့ ဟာ ဟိုးလွန်ခဲ့ တဲ့ အချိန် ကတည်းက နိူင်ငံတိုးတက် စေချင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ထင်ရှားနေလို့ ပါ ဥက္ကဌကြီး ခင်ဗျား။ ကျနော်တို့ လောက် စိတ်မရှည်လို့၊အချိန်မစောင့် နိူင်လို့ ၊ကျနော်တို့ ထက်ပိုပြီး ခံစားချက်ပြင်းထန်လို့သာ သူတို့ ဟာ မတန်တဆ အပြစ်ဒဏ်ကို ခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ သူတို့ ကို လွှတ်ပေးနိူင်ဘို့ အတွက်(လွှတ်ပေးမယ် ဆိုရင်)
ကျနော်တို့ ပြည်သူများဘက် က ၀ိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ကူညီနိူင်တဲ့ အကြောင်းအရာများ ရှိရင်လည်း လမ်းညွှန်ပေးစေလိုပါတယ် ဥက္ကဌကြီး ခင်ဗျား။
Kyaw Gyi သိန်းစိန် နဲ.စစ်အစိုးရသိရန် ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်သည်.ငရဲ၊တိစ္ဆာန်၊ပြိတာ၊အသုရကယ်.အပယ်လေးဘုံ ရှိပါသည်..နောက်ထပ် အပယ်တစ်ဘုံ တိုးလာပါသည်..ထိုတစ်ဘုံရဲ.နာမည်ကတော.."သိန်းစိန်နဲစစ်အစိုးရအတွက် သီးသန်.ငရဲ"လို.အမည်ရပါတယ်..အပယ်ငါးပုံဖြစ်သွားပါတယ်...ထိုငရဲသည်..ဘယ်တော.မှကျွတ်မည်မဟုတ်ပါ.....ပုံထဲက အတိုင်းခံရတော....မယ် .....သနားပါတယ်...ကွယ်.. အဲဒီ အပြစ်က တော..ရဟန်း သံဃာ သတ်တယ် ထောင်ထဲထည်.တဲ. အကျိုး ကျေးဇူးပါ...အဲဒီ ငရဲကို မရောက်ခင် ရဟန်း သံဃာ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်. အကျဉ်းသား အားလုံးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ.....သိန်းစိန်..
Shwe Myay Thu ဟိုပြောဒီပြောတွေ လျှောက်ပြောမနေပါနှင့်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အကျဉ်းစံနေရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။ မြန်မာပြည်မှ တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြောပြန်ပြီ .... ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျ ခံထားရသူတွေ မဟုတ်ဘူး။ အပစ်ရှိလို့ ပစ်ဒဏ်ကျခံရတဲ့ သူတွေပဲရှိတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် တကွနိုင်ငံေ၇း အကျဉ်းသား အားလုံးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ ခင်ဗျား။(13.12.11)10:24AM
ကိုမင်းကိုင်နိုင်နဲ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်...
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ။ သူတို့ မှာ အပြစ် မရှိပါဘူး။ မတရား အကျဉ်းချ ခံထားရတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။
မြန်မာကို ကမ္ဘာမှာ နေရာ တစ်ခု ရအောင် နိုင်ငံတကာနှင်. အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာလား၊ ကမ္ဘာနှင်. အလှမ်းကွာဝေးရာ တစ်နေရာမှာ ချန်ထားရစ်မှာလား ဆိုတာ အစိုးရသစ် အနေနှင်. စိမ်ခေါ် အကဲစမ်းမှုကြီးပါ။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီးက ရှေ့သို. တက်သုတ်၇ိုက် ချီတက်နေချိန်မှာ လေးလံတဲ. ခြေလှမ်းတွေနှင်. လျှောက်လှမ်းနေရင် နောက်ကျန်ရစ်ခဲ.မှာပါ။ တိုးတက်လျှောက် လှမ်းနိုင်ဖို.ပြည်တွင်း စစ်ပွဲတွေရပ်ပါ။ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင်. နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး ချက်ခြင်း လွှတ်ပါ။